nmn & nr kalitaon'ny vokatra vovoka hplc≥98% | Kalitaon'ny AASraw
Manamboara vokatra farany ambony, ento ny tsara indrindra.
AASraw dia manana rafitra fanaraha-maso kalitao feno ho an'ny SOP (Fomba fiasa mahazatra). Ny hetsika rehetra dia voarakitra an-tsoratra, afaka zahana, miaraka amin'ny valin-kafatra / fanehoan-kevitr'ireo mpanjifa ary ny fomba fitadidiana. Ny fitantanana ny fanandramana, fanovana, fanitsiana ary loza mety hitranga dia tontolo iainana mivelona amin'ny famokarana vovoka manta. Nandritra ny taona maro, ny akoranay dia manana kalitao tsara 100%, izay manampy anay hanangana laza mendri-kaja amin'ity orinasa ity.
Ankoatry ny lalàna mifehy ny fitantanana henjana amin'ny SOP, ny fitaovana mifandraika amin'izany dia hanampy amin'ny fanaraha-maso ny fomba fanao, fitsapana ireo vokatra, toy ny masinina HPLC (chromatography avo lenta), masinina chromatography Gas, milina LC / MS (Liquid chromatography – spectrometry marobe), sns. Ary koa, ny ekipanay R&D dia miasa mafy amin'ny famandrihana teknolojia fitsapana sy fanamarinana, ao anatin'izany ny fisarahan'ny fahalotoana, famakafakana, fanaraha-maso, sns. Ireo fitaovana fananana sy famakafakana dia ahitana:
UV-spectrophotometre hita maso. Bruker Tensor 27
–80 ° C, Fikarohana sambo 10 litatra (R&D)
–80 ° C, Kapila 500Liter ho an'ny fanamboarana kilao sy ny fanatsarana ny teknolojia
–80 ° C, 2000Fanamboarana baiko maro
100 bar, 100mL ~ Fikarohana sambo 1L & R&D）
100 bar, 20L ~ 50L Vessel kilo Fanamboarana sy teknolojia nihatsara
100 bar, 1000L ~ 5000L Famokarana baoritra misimisy visy